DAAWO: Ander Herrera Oo Ku Dhawaaqay Inuu Ka Tegayo Manchester United Iyo Nuxurka Muuqaal Qiiro Leh Oo Uu Soo Duubay – Cadalool.com
May 11, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Laacibka khadka dhexe ee Ander Herrera ayaa ku dhawaaqay go’aan aanay jelaysanin taageereyaasha Manchester United, kaas oo ah inuu soo afjaray waayihiisii Old Trafford.
Herrera oo ay da’diisu tahay 29 jir ayaa dhamaadka xili ciyaareedkan, waxa dhamaanaya qandaraaskii uu kula jiray Manchester United, waxaana war uu soo saaray uu ku sheegay inuu ka tegi doono kooxdiisa.
Kooxda PSG ee ka dhisan waddanka France ayaa la filayaa inay gacanta ku dhigto madaalahan khadka dhexe, waxaana toddobaadyada soo socda la sugayaa inay ku dhawaaqaan heshiis uu ugu wareegayo oo uu qaab bilaash ah kaga degayo Paris.
Muuqaal ay Manchester United ku baahisay barteeda Twitterka ayaa waxa Herrera ku macasalaameeyey kooxda oo sannadkii 2014 uu kaga soo biiray Athletic Bilbao, waxaana intii uu funaanadda United xidhnaa uu saftay 189 ciyaarood, isaga oo kula guuleystay Europa League, FA Cup iyo Carabao Cup.
Xili ciyaareedkii 2016-17 ayaa loo doortay ciyaartoyga sannadka ee ugu fiicnaa Manchester United.
Muuqaal uu soo duubay oo lagu baahiyey baraha bulshada, ayaa waxa uu ku yidhi: “Qalbigayga casaan ayaa ku yaalla (midabka dharka Manchester), waxaan garanayaa maalintii iigu horreysay ee aan halkan ka ciyaaro iyo waqtigii aan bilaabay inaan xidho. Kooxda haysata kumannaan taageereyaal ah oo ixtiraama sidoo kalena xasuusta dhamaan ciyaaryahannada wax walba siiyey.
“Xaalad gaar ah ayaan dareemaa marka aan maqlo magacayga oo lagu heesayo. Qab-weynaan ayaan dareemay markii ay taageereyaashu ii go’aamiyeen inaan qayb ka noqdo taariikhdan cajiibka ah.
“Waqti kasta oo aan metelay kooxdan, ciyaar kasta, guulihii iyo khasaarihii, xattaa marka aanan caawin karaynin, waxa aan fahamsanaa waxa ay kooxdani tahay.
“Waxaan xasuusnaan doonaa kulan kasta ku dhowaad 200 ciyaaarood ee aan ciyaaray anigo xidhan funaanaddan, sababtoo ah, inaad u ciyaarto kooxda ugu weyn England waxay ahayd sharaf run ah.
“Waad ku mahadsan tihiin shanta sannadood ee cajiibka ah.”
Halkan ka daawo muuqaalka macasalaamaynta